Nnweta Weebụ Na-agabiga Ọgụgụ ihuenyo | Martech Zone
Nnweta Weebụ Na-agabiga Na-agụ Ihuenyo
Wednesday, December 27, 2017 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Otu okwu na ịntanetị nke na-agbachi nkịtị na United States bụ ihe achọrọ maka ndị nwere nkwarụ iji nweta ya. Weebụ na-enye ohere dị ukwuu iji merie ihe mgbochi ndị a yabụ ọ bụ elekwasị anya na azụmahịa gị kwesịrị ị payinga ntị na ya. N'ọtụtụ mba, ịnweta abụghịzi nhọrọ, ọ bụ iwu chọrọ. Enweta nnweta abụghị ihe ịma aka, agbanyeghị, ebe saịtị na-aga n'ihu na-emekọrịta mmekọrịta ma na-arụ ọrụ teknụzụ - nnweta a na-abụkarị ihe a na-eche echiche kama ịbụ isi ihe.
Gịnị bụ nnweta weebụ?
Na mmekọrịta mmadụ na ihe nchọgharị, nnweta web na-ezo aka na nnweta ahụmịhe weebụ maka mmadụ niile, n'agbanyeghị ụdị nkwarụ ma ọ bụ oke nrụrụ. A na-ejikarị okwu ahụ bụ "nnweta" eme ihe maka ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ pụrụ iche, ma ọ bụ njikọta nke abụọ, iji mepụta iji kọmputa ma ọ bụ teknụzụ enyemaka site n'aka onye nwere nkwarụ ma ọ bụ nkwarụ.
Enwere ike inweta nkwarụ site n'ọrịa, trauma, ma ọ bụ bụrụ nke ebumpụta ụwa. Ha na-adaba n'ime otu n'ime edemede anọ ndị a:
visual - ọhụhụ-ụzọ dị omimi, isi zuru oke ma ọ bụ nke imeju, na isi ìsì.
Ntị - ntị chiri, ịbụ ntị ike, ma ọ bụ hyperacusis.
Mbugharị - ahumkponwu, mkpọnwụ ụbụrụ, dyspraxia, ọrịa ọwara carpal na ọnya ugboro ugboro.
Nkọwa - isi mmerụ, autism, nkwarụ mmepe, na nkwarụ mmụta, dị ka dyslexia, dyscalculia ma ọ bụ ADHD.
A na-ewere nnweta nnweta nnweta dị ka ọnụọgụ Nwachukwu, ebe nọmba 11 na-ezo aka na nọmba mkpụrụ akwụkwọ ewepụrụ.
Ebumnuche bụ isi nke nnweta weebụ bụ iwepụ ihe mgbochi nwere ike igbochi ndị nwere nkwarụ ka ha na ndị ọzọ nwee mmekọrịta ma ọ bụ ịnweta weebụsaịtị. Ndị na-ese ihe nwere ike iji ya akara ngosi semantic or àgwà accessibility ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ iji nyere ndị nwere nkwarụ aka imeri enweghị ike ha iji weebụsaịtị. Nke a infographic si Designmantic nkọwa Web Nnweta:
Gịnị bụ ARIA?
ARIA na-anọchi anya ngwa Internet Access Rich ma bụrụ setịpụrụ pụrụ iche àgwà accessibility enwere ike itinye ya na akara ọ bụla. Njirimara ọrụ ọ bụla na-akọwapụta otu ọrụ maka ụdị ihe dịka isiokwu, ịdọ aka ná ntị, mmịfe ma ọ bụ bọtịnụ.
Otu ihe atụ bụ ntinye ntinye na mpempe akwụkwọ. Site na ịgbakwunye ọrụ = bọtịnụ na mmewere HTML, na-enye ndị nwere ọhụụ ma ọ bụ ndị na-agagharị agagharị na-egosi na nrubeisi ahụ nwere ike ịmekọrịta.
Nwaleenụ gị n'forntanet maka Web Accessibility
E mepụtara Ngwaọrụ Nnweta Weebụ Weebụ (WAVE) ma wepụta ya dị ka ọrụ obodo na-akwụghị ụgwọ site na Weebụ
Ihe ndi ozo banyere nnweta:
World Wide Web Consortium na nnweta
Ntuziaka Nweta Ngwunye Ngwa ikike
Ntuziaka Nweta Ọdịnaya WeebụWCAG 2.0)
ARIA na HTML
You na-eji onye na-agụ ihuenyo ma ọ bụ ngwaọrụ nnweta ndị ọzọ maka saịtị m? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-amasị m ịnụ ihe na-enye gị nsogbu karịa!
Tags: Nwachukwunnwetaàgwà accessibilityInweta Ngwa Richntanetị Ọgaranyaariacognitionmmebeanụinfographicagagharịakara ngosi semanticanyaefegharị efegharịnnweta weebụ
Peeji nke a na - enweta ngwa ngwa dị ngwa, mana echefula nchịkọta!